Ny Semalt dia manome torohevitra lehibe sy fitaovana hiadiana amin'ny WordPress Comment Spam
Raha manana tranokalam-baovao na bilaogy malaza ianao, dia mety hahazo valiny maromaro momba ny spam isan'andro ianao. Soa ihany, nianatra niady tamin'ny fanehoan-kevitra spam tao WordPress izahay, ary maro ny teknika nampidirina tamin'ny fotoana. Raha toa ka vao haingana ianao ary tsy mahafantatra ny fomba hanombohana, dia tokony hotadidinao ireo torohevitra sy fitaovana manan-danja hiadiana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny spam ao amin'ny WordPress araka ny fanazavan'i Igor Gamanenko, manam-pahaizana mahafinaritra avy amin'ny Semalt . 12)
1. Manaova ny Plugin Akismet:
Tsara ny manamarika fa i Akismet no iray amin'ireo plugins tena malaza sy manan-danja amin'ny tranokalan'ny WordPress sy bilaogy. Tsy mila maka azy ianao satria ity plugin ity dia mialoha ny fametrahana ny kaonty WordPress rehetra. Saingy mila manitsy ny toe-javatra araka ny zavatra takinao amin'ny tanana ianao. Akismet no fitaovana azo itokisana indrindra raha ny fanesorana ny tsikera spam. Mampiditra fanehoan-kevitra tsy misy dikany izany ary manakana anao tsy hamoaka zavatra spam ao amin'ny blôginao.
Ireo mpitoraka blaogy sy webmasters vaovao dia mino fa ny fampiasana plugins hanaisotra ireo toetra nofollow avy amin'ny raki-tsoratra mpanoratra dia azo antoka, saingy diso izy ireo. Raha ny marina, ny rohy nofollow sy dofollow dia tena ilaina amin'ny fanatsarana ny lozam-pifaneraserana amin'ny tranokalanao..Na ireo tsetsatsetsa tsy-spam aza dia omen'ireo olona tena izy ka tsy afaka misoroka azy amin'ny plugin tsotra. Fa tokony hanaisotra an'ireto fanehoan-kevitra ireto izay tsy manara-dalàna aminao ianao. Raha tsy mampiasa plugin amin'io lafiny io ianao dia mandehana mankany amin'ny tendron'ny fahatelo.
3. Mampihena ny tsetsatsetsa Comment amin'ny Cookies:
Ity fomba fampianarana ity dia ilaina raha tsy fantatrao ny fomba fiasan'ny cookies sy ny fomba ahafahan'izy ireo mivezivezy. Ny Cookies for Comments plugin dia iray amin'ireo kelinay indrindra ary ahazoanao mora foana ny asanao. Ny ankabeazan'ny spam sy bots dia sora-baventy manaparitaka, ary afaka mamonjy ny tranokalanao amin'izy ireo ianao amin'ny fampihenana ny isan'ny fanehoan-kevitra amin'ny spam mampiasa cookies.
4. Atsaharo ny fanamarihana Spam miaraka amin'ny honeypot:
Ny teknôlôjika Honeypot dia iray amin'ireo mahomby indrindra amin'ny fanesorana spambots amin'ny aterineto. Voalohany, tsy maintsy mametraka sy mampiasa ny WP-Spam Fighter Plugin ianao. Raha vantany vao tafiditra dia mandehana any amin'ny "WP-Spam Fighter" fifanakalozan-kevitra "Settings" ary tsy manadino ny hampiasa ny fiarovana ny honeypot. Tena hiaro ny tranokalanao amin'ny fanehoan-kevitra sy ny bots amin'ny tsipika isan'andro.
Mba hampidirana ny fanamarinana captcha, ny fitaovana tsara indrindra dia WP-reCAPTCHA. Amin'ny alalan'ity programa ity dia afaka mametraka mora foana ireo fanamby ofisialy amin'ny endrika fanehoan-kevitra ianao, mba hisorohana ireo hackers sy spammers amin'ny fanelingelenana anao isan'andro amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny spam. Avelao aho hilaza aminao fa ny olona sy ny botsika dia afaka mampiditra ity captcha ity dia tsy mahafantatra akory ireo teny voatonona ao amin'ny kapila; Noho izany, azo antoka fa voaro amin'ny tsikera tsy misy ilana azy sy ny spam ny tranokalanao.
6. Famaritana ny fanehoan-kevitra momba ny fampitam-baovao:
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny WordPress dia ny mamorona ny sary mivantana sy ny pejy izay ahitan'ireo mpitsidika azy ireo sary ary mametraka ireo fanamarihana araka ny faniriany. Ity dia hanakana anao tsy hahazo valiny momba ny spam raha toa ka misy olona mifandray amin'ny tranonkalanao. Azonao atao ny manala ny fanehoan-kevitra ao amin'ny rakitra fampiasa amin'ny media, ny votoatiny sy ny zavatra mifandraika amin'izany. Ny famoahana ireo fanehoan-kevitra ireo dia hamonjy ny tranokalan-tserasera WordPress amin'ny spammer sy hackers Source .